Gartner Amụma nke Top 10 Teknụzụ maka 2011 | Martech Zone
Ọ na-atọ ụtọ ịgụ Ebumnuche Gartner nke teknụzụ 10 kacha elu maka 2011Na otú otu amụma ọ bụla si emetụta ahịa dijitalụ. Ọbụna ọganihu na nchekwa na ngwaike na-emetụta ikike ụlọ ọrụ ịmekọrịta ma ọ bụ ịkekọrịta ozi na ndị ahịa na atụmanya ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma.
Teknụzụ iri dị elu maka 2011
Cloud Computing - Ọrụ igwe ojii na-arụ ọrụ dị iche iche site na ọha na eze mepere emepe na nzuzo. Afọ atọ sochirinụ ga-ahụ nnyefe nke igwe ojii ọrụ dị nso na-adaba n'etiti oke abụọ a. Ndị na-ere ahịa ga-enye ngwugwu igwe ojii na-eweta ngwugwu nke na-anapụta teknụzụ ọrụ igwe ojii nke ọha na eze (ngwanrọ na / ma ọ bụ ngwaike) na usoro (yabụ, omume kachasị mma iji wuo ma rụọ ọrụ ahụ) n'ụdị enwere ike itinye n'ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa. Ọtụtụ ga-enyekwa ọrụ njikwa iji jikwaa njikwa ọrụ igwe ojii arụ ọrụ. Gartner na-atụ anya ka nnukwu ụlọ ọrụ nwee otu ndị na-eme ngwa ngwa na 2012 nke na-ahụ maka mkpebi na njikwa igwe ojii na-aga n'ihu.
Ngwa mkpanaka na mbadamba mgbasa ozi - Gartner kwuru na ka ọ na-erule ngwụcha afọ 2010, mmadụ ijeri abụọ na otu narị ga-ebu ekwentị ndị nwere ọnụ ahịa azụmahịa bara ụba na-enye ezigbo ọnọdụ maka ijikọ ngagharị na webụ. Ngwaọrụ ekwentị na-aghọ kọmpụta nke aka ha, yana ikike ịtụnanya nke nhazi na bandwidth. Enweelarị ọtụtụ narị puku ngwa maka nyiwe dịka Apple iPhone, n'agbanyeghị oke ahịa (naanị maka otu ikpo okwu) na mkpa maka nzuzo pụrụ iche.
Ọdịdị nke ahụmịhe nke ngwa na ngwaọrụ ndị a, nke nwere ike itinye ọnọdụ, ngagharị na ọnọdụ ndị ọzọ na omume ha, na-eduga ndị ahịa ka ha na ụlọ ọrụ na-akpakọrịta ọkacha mma site na ngwaọrụ mkpanaka. Nke a na - eduga n'ịgba ọsọ iji kwalite ngwa dị ka ngwa ọrụ asọmpi iji melite mmekọrịta ma rite uru karịa ndị asọmpi nke ihu ya na-adabere na ihe nchọgharị.
Nkwukọrịta mmekọrịta na mmekọrịta - A ga - ekewa mmekọrịta ọha na eze na: (1) ịkparịta ụka n'Socialntanet -a na-elekọta mmadụ profaịlụ ngwaahịa, dị ka MySpace, Facebook, LinkedIn na Friendster yana-elekọta mmadụ ịkparịta ụka n'analysisntanet analysis (SNA) teknụzụ na-eji algọridim ịghọta na ahu nagide mmekọrịta mmadụ na nchọpụta. nke ndi mmadu na nka. (2) Mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze-teknụzụ, dịka wikis, blọọgụ, ozi ngwa ngwa, ụlọ ọrụ na-emekọ ihe ọnụ, na ịkwanye igwe mmadụ. (3) Nkọwapụta mmekọrịta ọha na eze-teknụzụ na-enyere obodo aka ịkọkọta ọdịnaya onye ọ bụla n'ime nchekwa data nwere ike ịnweta na nke obodo dịka Youtube na flickr. (4) Nzaghachi ndi mmadu - inweta nzaghachi na echiche sitere na ndi obodo banyere ihe di iche iche dika akaebe na Youtube, flickr, Digg, Del.icio.us, na Amazon. Gartner buru amụma na site na 2016, teknụzụ mmekọrịta mmadụ na mmadụ ga-esonye n'ọtụtụ ngwa azụmaahịa. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ijikọ ọnụ na mmekọrịta ha na CRM, nkwukọrịta dị n'ime na imekọ ihe ọnụ, yana atụmatụ mmekọrịta ọha na eze na atụmatụ.
Video - Vidiyo abụghị ụdị mgbasa ozi ọhụụ, mana iji ya dịka ụdị mgbasa ozi ọkọlọtọ ejiri na ụlọ ọrụ ndị na-abụghị ndị mgbasa ozi na-agbasa ngwa ngwa. Omume teknụzụ na eserese dijitalụ, igwe elektrọnik, web, sọftụwia mmekọrịta, nkwukọrịta ọnụ, igwe onyonyo na nke ịntanetị na kọmputa na-eru isi ihe dị oke egwu nke na-eweta vidiyo n'ime isi. N'ime afọ atọ sochirinụ Gartner kwenyere na vidiyo ga-abụ ụdị ọdịnaya ọdịnaya na mmekọrịta mmekọrịta maka ọtụtụ ndị ọrụ, yana site na 2013, ihe karịrị 25 pasent nke ọdịnaya ndị ọrụ na-ahụ n'otu ụbọchị ga-achịkwa foto, vidiyo ma ọ bụ ọdịyo.
Nchịkọta Ọgbọ ọzọ - Increbawanye ikike kọmputa nke kọmputa gụnyere ngwaọrụ mkpanaka yana ịkwalite njikọta na-enyere aka ịgbanwe etu esi azụ ahịa na-akwado mkpebi arụmọrụ. Ọ ga - ekwe omume ịme ihe nlere ma ọ bụ ụdị iji kwupụta ihe ga - eme n'ọdịnihu, kama ịnye naanị data na - ele anya azụ banyere mmekọrịta mmekọrịta gara aga, yana ịme amụma ndị a na oge iji kwado ọrụ azụmahịa ọ bụla. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịchọ mgbanwe dị mkpa na arụmọrụ arụmọrụ yana akụrụngwa ọgụgụ isi azụmaahịa, ikike dị iji mepee mmụba dị ịrịba ama na nsonaazụ azụmaahịa na ọnụọgụ ndị ọzọ na-aga nke ọma.
Nchịkọta Mmadụ - Na-elekọta mmadụ nchịkọta na-akọwa usoro nke ịlele, nyocha na ịkọwapụta nsonaazụ nke mmekọrịta na mkpakọrịta n'etiti ndị mmadụ, isiokwu na echiche. Mmekọrịta ndị a nwere ike ime na ngwa ngwanrọ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-arụ ọrụ, n'ime obodo ma ọ bụ na-eche ihu na mpaghara ma ọ bụ na ntanetị. Na-elekọta mmadụ nchịkọta bụ okwu nche anwụ nke gụnyere ọtụtụ usoro nyocha pụrụ iche dịka nzacha mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nyocha mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nyocha mmetụta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. nchịkọta. Ngwaọrụ nyocha nke netwọkụ bara uru maka inyocha usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya yana usoro ọrụ ndị mmadụ, otu ma ọ bụ otu dị iche iche. Nnyocha ntanetị mmekọrịta na-agụnye ịnakọta data sitere n'ọtụtụ isi, ịmata mmekọrịta, na ịtụle mmetụta, ogo ma ọ bụ ịdị irè nke mmekọrịta.
Ihe omuma-Ama Kọmputa - Ebe ngosiputa ihe omuma banyere ihe omuma banyere echiche nke iji ihe omuma banyere onye oru ma obu ihe gburugburu ya, ihe omuma ya na ochicho gi iji meziwanye nmekorita nke onye oru a. Onye njedebe ikpeazụ nwere ike ịbụ onye ahịa, onye ọlụlụ ma ọ bụ onye ọrụ. Usoro ihe omuma banyere ihe omuma na-eche ihe ndi oru choro ma jiri aka mee ihe kachasi nma, ihe ahia ma obu oru. Gartner na-ebu amụma na site na 2013, ihe karịrị ọkara nke ụlọ ọrụ Fortune 500 ga-enwe atụmatụ ịkọwapụta gburugburu ebe obibi na site na 2016, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ịzụ ahịa ahịa ekwentị mkpanaka ga-abụ nke dabeere na ya.
Nchekwa Klas Nchekwa - Gartner hụrụ nnukwu ojiji nke nchekwa nchekwa na ngwa ndị ahịa, akụrụngwa ntụrụndụ na sistemụ IT ndị ọzọ agbakwunyere. Ọ na-enyekwa ọkwa ọhụrụ nke ndị isi nchekwa na sava na kọmputa ndị ahịa nwere uru dị mkpa - ohere, ọkụ, arụmọrụ na ruggedness n'etiti ha. N'adịghị ka RAM, ebe nchekwa dị na sava na PC, nchekwa nchekwa na-adịgide adịgide ọbụlagodi mgbe ewepụrụ ike. N'ụzọ ahụ, ọ dị ka draịva diski ebe etinyere ozi ma gha ịlanarị ike-ala na reboots. N'iburu ego ọnụahịa, nanị iwulite draịvụ steeti siri ike site na flash ga - ekekọta ohere ahụ bara uru na data niile dị na faịlụ ma ọ bụ olu niile, ebe ọhụụ akọwapụtara nke ọma, ọ bụghị akụkụ nke sistemụ faịlụ, kwere ka itinye naanị ihe omuma di elu nke choro ichota ihe omuma nke oru na ntachi obi nke nwere ihe omuma.
Ubiquitous Mgbakọ - Ọrụ nke Mark Weiser na ndị nyocha ndị ọzọ na Xerox's PARC na-ese ihe osise nke ọbịbịa nke atọ nke mbido ebe kọmputa na-abanye n'ime ụwa na-adịghị ahụ anya. Dika komputa na abawanye na dika enyere ihe nke ubochi ikike iji kpotata mkpado RFID na ndi n’eso ha, netwọkụ gha abiaru ma gabiga ogo nke enwere ike ijikwa ya na uzo ndi ozo. Nke a na - ebute usoro dị mkpa nke imbuing usoro ihe eji arụ ọrụ na teknụzụ arụmọrụ, ma ọ bụrụ na emee ya dị ka teknụzụ dị jụụ ma ọ bụ jikwaa ma jikwaa ya na IT. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ntụzịaka dị mkpa banyere ihe anyị ga-atụ anya ya na ngwaọrụ nke na-aba ụba, mmetụta nke ịre ahịa na mkpebi IT, yana ikike ndị dị mkpa nke nrụgide nke mmụba ngwa ngwa na ọnụ ọgụgụ kọmputa maka onye ọ bụla ga-akwalite.
Akụrụngwa-Dabere Infrastructure na Computers - A kọmputa dabeere na ákwà bụ a modular ụdị Mgbakọ ebe a usoro nwere ike ikpokọta site na iche iche ụlọ-ngọngọ modulu ejikọrọ na a ákwà ma ọ bụ Switched backplane. Na ụdị ya, kọmpụta dabere na kọmputa nwere ihe nhazi dị iche, ebe nchekwa, I / O, na modul ndị na-ebupụ (GPU, NPU, wdg) ejiri jikọta njikọta gbanwere yana, nke dị mkpa, sọftụwia achọrọ iji hazie ma jikwaa n'ihi sistemụ (s). Ihe eji eme akwa (FBI) bu ihe omuma - ihe nhazi, ntaneti ntaneti na njikọ na nchekwa - n'ime ọdọ mmiri nke Fabric Resource Pool Manager (FRPM) na-achịkwa, ọrụ ngwanrọ. FRPM n'aka nke Real Time Infrastructure (RTI) na-achịkwa ihe ngwanrọ ngwanrọ. Otu onye na-ere ahịa ma ọ bụ otu ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ ọnụ, ma ọ bụ site na onye na - emekọ ihe ọnụ nwere ike iweta FBI.